မေစစ်ပိုင်| January 23, 2013 | Hits:2,529
2 | | အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနပိုင် ရန်ကုန်မှ ဖဆပလ တိုက်ခန်းများ မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိတချို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးသော်လည်း အမှုမရုပ်သေး
ရွှေတော ရေကြီး မြေပြိုမှု သေဆုံးသူ ၃၆ ဦး အတည်ပြု၊ တရုတ်နိုင်ငံသားများလည်း ပါဝင်
ရွေ့လျားပညာရေးနှင့် ဘက ကျောင်းများကို ဟောင်ကောင် တက္ကသိုလ် ကူညီ
နေပြည်တော် အမြန်လမ်း အရေးပေါ် ၀န်ဆောင်မှု စတင်ပြုလုပ်နေ
ဦးတေဇက သတင်းစာပညာ ဖောင်ဒေးရှင်း အတွက် ဒေါ်လာ ၁ သန်း ထောက်ပံ့မယ်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Linyone January 23, 2013 - 9:53 am	As long as the government is doing this kind of business, it will hurt private companies to compete each other. The government better allows the private companies to compete under the leadership of the government. The winner at the competition always has the right to build. Now, the umpire himself is kicking the ball and it will hurt the nation for the long run in building democracy. It is not democratic way either. The Burmese junta still lacks of finding better way to serve the people and the nation. The government needs to be the umpire, not the player. As long as the government is not doing right, corruption will keep existing in the society, especially inside the government.
Reply	ဗမာ January 23, 2013 - 1:53 pm	တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာဆိုသော်လည်း အရည်အသွေးပြည့်မီကောင်းမွန်ဖို့ လွန်စွာအရေးကြီးပါတယ်။ အထပ်မြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက် မြေငလျင်ဒဏ် အတော်အတန်ခံနိုင်ဖို့ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ခေတ်ဟောင်းက ပေါင်းစား၊ညာစား၊အမြတ်ကြီးစား စံနစ်တွေကို ဥပဒေနဲ့စည်းကမ်းနဲ့ကြပ်မတ်မှ တော်ကာကျပေမည်။ သို့မဟုတ်ပါက တန်းဖိုးနည်းအိမ်ယာတွေနဲ့ တန်ဖိုးကြီးသောဒုက္ခဝေဒနာတွေ ပြည်သူတွေကိုပေးသလို ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့လက်နဲ့ရေးတဲ့စနစ်ကို အောက်ခြေအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ခြေနဲ့ဖျက်တာမခံရဖို့ အထက်မှဆရာကြီးများ အောက်ခြေထိဆင်းကြည့်ပြီး ကြပ်မတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ တိုက်ပြိုကျ၍ လူ ၃ ဦးသေဆုံး၊ ၂၄ ဦးဒဏ်ရာရ
မီးရထား ရုံးချုပ်ဟောင်းကို ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ် ဆောက်ရန် ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းမြှုပ်နှံမည်
ရန်ကုန်တွင် ခွင့်ပြုချက် မရှိ တိုက်ဆောက်သူ ၅၀၀ ကျော်ကို စည်ပင်က တရားစွဲ
ကွန်ဒိုမီနီယံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေး အပြီးမသတ်နိုင်သေး
အမြင့်ပျံ ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေနှင့် တိုက်ခန်း ဈေးကွက်